သင်များအတွက်မြျှောခဲ့ကြတဲ့မျဉ်း၏ထိပ်တန်း XXX ဂိမ်းမြှုပ်နှံဖို့အလွန်အကောင်းဆုံးအတွက်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာ? ထိုအခါကိုယ္စား Toadhorn ယို၊လို့ကြိုဆိုစုန်းမမုဆိုးသင်တန်းဆရာ! ပထမဦးစွာမျှော်မှန်းဇင်ဘာလထဲမှာ ၂၀၁၇၊ဒီဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာ-အုစု၏ဂိမ်းစွဲသောအမှန်တကယ်ပေးချင်လူတိုင်းလက်လှမ်းတစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဂုဏ်အတွေ့အကြုံအတွက်ဂိမ်းကစား။ ကျွန်တော်တို့တွေတင်ဆက်ဖို့ပျော်ရွှင်ဤခေါင်းစဉ်ကိုသင်သောမျှော်လင့်ပါတယ်သောအားဖြင့်ကစားက၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ကောင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်တီးကြယ်ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ။, တစ်လျှောက်လုံးသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊သင်လ့လာမွတ္သားျခင္း၏ဒေသများတွင်နေတတ်အားဖြင့်၊နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သော NPCs နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့များကိုလက်ခံရရှိအဆုံးပေါ်အာရုံစိုက်သောရန်သူလက်မှသင်ဂရုမစိုက်တဲ့အတွက်အများကြီး။ သင်အောင်ထုတ်အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်? အသိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်ဝန်စုန်းမမုဆိုးသင်တန်းပေးဖို့အဘယ်အရာကိုမြင်သွားမယ့်! အို၊ပါကကျေးဇူးပြုပြီးရှေ့ဆက်အချိန်ဤခေါင်းစဉ်ကိုလုံးဝအခမဲ့ကစားရန်! မှန်–သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်ချေတစ်ပြားနှင့်ကျွန်တော်တော်တော်အများကြီးအာမခံချက်သင်၏အချိန်သုံးစွဲရမှာပျော်စရာဖြစ်ဖို့အမြင့်ဆုံး။ ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်ပါနဲ့?, ကောင်းစွာ၊ကထွက်ကြိုးစားနှင့်သင်လျှင်သင်မှား၊ကျွန်တော်နောက်ကျောသင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံပေးရ!
ဤသည်အရွယ်ရောက်-အာရုံ၊သိမှအလွန်အစကကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လုံးဝစိတ်ကူးဖို့လူတိုင်းအတွက်ကြိုးစားချင်။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်စုဆောင်းအကောင်းဆုံးလိင်ဂိမ်းအနုပညာရှင်များတယ်ဖြတ်ပြီးလာအရဂိမ်းအပြုအတိအကျဘယ်လောက်စေချင်တယ်။ သင်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပေါက်စောစောပေါ်သင်သည်ဤအမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်လွှတ်ပေးဖို့ဒီဇိုင်းစွဲသင့်ကိုစောင့်ရှောက်နှင့်အပြန်ခြေလှမ်းယူသီးအထို့ကြောင့်မကြာခဏသဘောပေါက်နားလည်ရန်ခေါင်းစဉ်ရဲ့အလှ။ ကျနော်တို့အများကြီးရှိသည်ယုံကြည်ရှေ့ဆက်မသွားတဲ့လူတွေကိုချစ်ရန်သွားကြသည်အဘယျသို့ WHT အားလုံးအကြောင်းပါသော–အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းဌာန။, တူတစ်စိတ်ကူးဖစ္ၿ၊ကျွန်တော်တို့လည်းအလုပ်အနုပညာရှင်များ၏နံပါတ်ဖန်တီးရန်အထူးအများသည်ငါတို့အဘို့အကြောင်းသင်ဝင်ရောက်သည့်အခါဖြည့်စွက်အမျိုးမျိုးသောတာဝန်များကိုနှင့်တာဝန်။ ကျော်ရှိပါတယ် ၁၅၀ မူထူးခြားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတိုလစ်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တစ်လျှောက်လုံးဂိမ်းကမ္ဘာဦးသေဆုံးပြီးအားဖြင့်အချို့ရန်သူ၊အဆုံးမှာတစ်ရှာပုံတော်နှင့်တော့။ ဒီ၏ရည်ရွယ်ချက်ကြီးရောက်စေဖို့တန်ဖိုးအသုံးပြုသူမှအကူအညီပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုအတွက်အဘို့မိမိတို့ရှာပုံတော်အဆှတန်ခိုးအာနုဘော်:ကြိုးစားကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အထဲကကြည့်ရှုဘယ်လိုအမှုအရာ။ ဤမျှလောက်နှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးစုန်းမမုဆိုးသင်တန်းဆရာ၊သင်ဘယ်တော့မှမယ်တူခံစားရှိပါတယ်မှိုင်းခဏဒီဂိမ်းအတွက်။, ရုံလုပ်ဖို့အဆင်သင့်အချို့တော်တော်ယုတ်မှုအရာအဘယျသို့ရရလိုခငျြ–အခမဲ့!
သင်ဖျားနာနှင့်ပင်ပန်းကြောင်းဂိမ်းများများမှာသာအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်၊သို့မဟုတ်သူတို့သာဖြစ်အသုံးပြုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအပေါ်? သတင်းကောင်းဂိုဏ်းမှာ Toadhorn ယိုခံစားရအတိအကျတူညီလမ်း! ဘစိတ်ကြိုက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဂိမ်းကိုနိုင်ပြေးအားလုံးထုတ်ကုန်များပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့! ရိုးရိုးဝန်စုန်းမမုဆိုးသင်တန်းဆရာနှင့်သင်သိလာပါလိမ့်မယ်ရှိပါတယ်အခြေခံအဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာရှေးဟောင်းပြတင်းပေါက်များအလုပ်လုပ်တယ်စက်မှတဆင့်အဆိုပါအလွန်နောက်ဆုံးပေါ်–သမျှကိုသင်ရတယ်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြုရ။, ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့၊ကျနော်တို့မိတ်ဆက်စနစ်သစ်နှင့်လာမည့်နှစ်တွင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအင်္ဂါရပ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လိမ့်မယ်-ကိုတိပေး! မည်သို့သည်ကြီးလှပေ? မရှိခဲ့ဖူးပိုကောင်းတဲ့အချိန်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူအခမဲ့ဂိမ်း၊ဒါလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြီးအကျယ်မျက်နှာနှင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခင်အချိန်ထွက်ပြေးရသည်။ ကျွန်တော်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ကြယ်၏အသုံးပြုမှုသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်ပူဇော်ရန်ဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြွယ်ဝသော XXX ဂိမ်း၏အကြိုက်ရာမဲ။ ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံကြည်ပါနဲ့? အိုးကောင်လေးတစ်ယောက်–သင် sorely နှင့်ဝမ်းမှား!, ပါကအားလုံး၏ကယ်တင်ဖိုင်များကိုနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်စုန်းမမုဆိုးသင်တန်းဆရာပြိုင်၊ဒါကြောင့်သင်သွားသောလမ်းအတွက်ဂရုစိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ် Toadhorn ယိုမလုပ်ညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်။
နေစဉ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအသားေစ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချို၊ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်အဆုံးအထူးစနစ်များအတွက်နှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆိုလိုတာကဒီအအတိအကျ? သင်ရှိသည်ကစားရန်အမှန်တကယ်လေးမြတ်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ XXX ဂိမ်း! အတိုချုပ်ထဲမှာသော်လည်း၊အဆိုပါတိုက်ခိုက်ရေးရိုးရိုးထွက်၏ဤလောကအချိန်အတွက်အားလုံးမှာခင်ဗျားသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတိကဝတ်သင်တဦးတည်းပေးခြင်း၏အပူဆုံးဂိမ်း၏အားလုံးအချိန်–မပင်သီးသန့်အရွယ်ရောက်ပြီးနယ်ပယ်!, ကျော်ရှိပါတယ် ၂၀၀ ထူးခြားတဲ့ရန်သူကိုသတ်၊၁၀ ယာမ်ားအေဇင်သို့မဟုတ်ဒီတော့တိုက်ခိုက်ရေးရင်းသင်အလုပ်အပေါ်တကယ်စေ၏စွန့်စားမှုမှာအ။ ပဲပြင်ဆင်ဖို့တှေ့အချို့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အရာအဖြစ်သင်စူးစမ်းစုန်းမမုဆိုးသင်တန်းဆရာ။။။။။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာယူရလောကမှန်တယ်၊ဒါပေမဲ့အခုဘယ်မှာကျွန်တော်လိုချင်တယ်၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်မကြာမီလုံလောက်တဲ့သည္ဤအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ်းစျေးကွက်အပေါ်။ အကြှနျုပျတို့သညျဖို့မျှော်လင့်နိုင်ရအနည်းငယ်များအတွက်ဆုလာဘ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူထူးခြားတဲ့ရှိကြချုပ်သမားလုပ်ပစၥည္း၏အျခားအခ်က္မ်ားအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားလူအစုအဝေး။, သငျသညျယောက်ျားတွေကြောက်မက်ဘွယ်–အပေါင်းသင်ဘယ်လိုသိမှရရန်တစ်လျောက်ပတ်သောအစည်းအဝေး၏ချမ်းသာသည့်အခါလိုအပ်သည်။
စဉ်တွင်အဓိကဂိမ်းပြုမှာ၊ကျွန်တော်တို့ဟာချတွေအများကြီးထွက်ထုံးစံရာကျော်ကိုလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်နှင့်လအတွင်း။ ဒါဟာတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့ပေါက်ကွဲမှုမှကြိုဆိုဖို့လူတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်သို့ဝေးနှင့်အတူ ၃ အပြည့်အဝချဲ့ထွင်မှုကြောင့်ကျော်ကိုလာမယ့် ၁၂ လ၊ကကောင်းတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးရရန်အတွက်အစောပိုင်းဒါကြောင့်သင်ဟာအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီထက်ပိုမိုမြန်ဆန်အခြားလူတိုင်းအခါအမှုအယုတ်။ ကျေးဇူးတင်စကားဤမျှလောက်အဘို့အထွက်စစ်ဆေးနေ WHT–ငါသင်သည်ဤမွေ့လျော်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဂိမ်းထဲမှာကိုယ့်အဖြစ်အများကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရဖန်တီး! စောင့်ရှောက်မှုယူနှင့်ပျော်မွေ့၏ဤအချိန်အလယ်ခေတ်ဆှ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး!